Waa maxay qaabka ugu fudud si ay u gudbiyaan files ka Nokia in LG? Inta badan oo idinka mid ah waxaa laga yaabaa jecel Nokia laakiin markaas telefoonada LG leeyihiin jiidashada u gaar ah. LG soo dhigay laabtay joogta ah iyo telefoonada LG G awooddiisa ku guuleysatay inay si fiican u dhalin.
Sidaas, waxa ay ka dhigeysaa fudud si ay u gudbiyaan xidhiidhka ka dhexeeya labadan telefoonada?
Nokia iyo LG waa casriga ah oo caan ah laakiin socda laba OS kala duwan. Nokia waddaa Microsoft ee Windows 8 iyo LG waddaa Google ee Android. Haddii aad ka beddelanaya Nokia in LG, aad rabto in aad sidoo kale kuu soo gudbin xogta. Xogta beddelashada ka qalab Windows ah in ay Android laga yaabaa in aanay si fudud. Waxaad u baahan tahay codsi xisbiga saddexaad si ay u kala iibsiga, laakiin codsiyo aan waa lacag la'aan.
Habka lacag la'aan ah wax caadi ah si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia qalabka LG
Waa maxay habka ugu free si ay u gudbiyaan xiriirada? Inkastoo habka xor ma run ahaantii wax ku ool ah waxaa laga yaabaa, waa doorasho fiican aad si kastaba ha ahaatee haddii aadan diyaar u isticmaasho mid ka mid ah warqadda cagaaran.
Haddii aad raadinayso hab xor ah, talaabooyinka soo socda waxay kaa caawin doontaa in aad wareejin xiriirada lacag la'aan ah.
1. Muuqaalka waa sida kaliya ee ay u gudbiyaan xiriirada laakiin waxay u baahan tahay shaqo yar ka kooxdiisa. Haddii aad hore u leedahay xisaabta aragti ku daray in ay aad telefoon u gudub Tallaabada 4. Haddii aan, u tag goobaha aad Nokia oo taga si aad email + xisaabaadka.
2. Haddaba tag in xisaabta ku dar iyo daaha soo socda siin doonaa fursado dhowr ah. Dooro saadaasha.
3. Hadda saxiixo in si xisaabta saadaasha.
4. Booqo website-ka www.outlook.com . Gal account saadaasha la isticmaalayo aqoonsiga la mid aad loo isticmaalo aad Nokia. Marka aad soo xisaabta, u tag menu ugu weyn ee koonaha bidix ee sare dooro Dadka.
5. tab cusub oo kor u furi doonaa oo sax ah oo ku saabsan "All" in ay doortaan oo dhan xiriiro. Haddaba tag u Maamul ka dibna dooro "Dhoofinta ee Outlook.com iyo adeegyada kale". Tani furi doonaa oo dhan xiriirada aad faylka Excel la format .CSV. Just badbaadin file in on your computer.
Android si fudud u furan kartaa file .csv ka Android. All inaad samayso waa file u gudbin on inay telefoonka aad Android isticmaalaya cable USB iyo furi file ku saabsan telefoonka oo si toos ah u dari doono oo dhan xiriirada ku saabsan in qalab aad.
Habkani shaqeeyaa ganaax, laakiin waxa ay leedahay khasaaraha qaar ka mid ah:
1. Habkani qaadataa shaqo aad u badan ka kooxdiisa.
2. Waxaad u baahan tahay xisaab aragti, taas waa in la beehsa, iyadoo telefoonka.
3. Waxaad magacyada iyo xiriir laakiin waxaad laga yaabaa inuu seego laga yaabaa in on sawirada.
Xal wanaagsan: 1 click si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia qalabka LG
MobileTrans Waa xal aad u fiican uga Nokia wareejinta xiriirada qalabka LG. Waxaa wareejin karaan xiriirada, Cajalado, jadwalka, videos, barnaamijyadooda, abuse wac, iyo fariimaha qoraalka ah. Habka Buuxi qaadataa hal kaliya click. Habkani gabi ahaanba waa halis xor ah oo nabad ah.
Talaabooyinka in xogta laga Nokia Symbian wareejiyo qalabka LG isticmaalaya MobileTrans
MobileTrans Ka dhigaysa nidaamka dhamaystiran wareejinta xogta fudud oo si sahlan. Oo dhan tallaabooyin adag loo dhimay hal click. Hubi akhriso hagahaan ee isticmaalaya software sida ay la helaan doonaa telefoonka xog muhiim ah. Halkan waxaa ku qoran shuruudaha habkan.
Tallaabada 1. Daahfurka software on your computer. Software shaqeeya labada Mac iyo daaqadaha. Haddaba tag si ikhtiyaar ah buluug midabka leh ee "phone inay kala iibsiga phone".
Tallaabada 2. Next phone Nokia Symbian iyo qalab LG aad xidhmi doontaa. Ha software ah in la ogaado. Waxaad dooran phone Nokia sida il iyo qalab LG sida telefoonka meel loo ahaadana iyadaa u. Fiiro gaar ah, hubi in isticmaalka cable ka saarayaasha kala sababtoo ah isku xirnaanta saamaynta.
Tallaabada 3. Hadda mar telefoonada ay ku xidhan yihiin go guddi dhexe ee lagu dooranayo content aad rabto nuqul. Sida aad doonaysid in aad nuqul aad xiriirka la leedahay. Just doortaan xiriirada iyo fursadaha kale ee ka tago unticked. Just guji nuqul Start iyo habka kala iibsiga ka bilaabi doona.
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan Nokia Wondows Xiriirada qalabka LG la MobileTrans
Tallaabada 1. Wixii Windows Phone xiriirada, fadlan marka hore hubi in ay la xoojiyaa in Onedrive ku saabsan telefoonka. Just ka jaftaa All Settings kaabta aad telefoon, saxiixo in account microsfot aad ka dibna dooro Xiriirada inay gurmad.
Tallaabada 2. Open Wondershare Mobiletrans on your computer, dooro Soo Celinta ka kaabta on interface ugu weyn ka dibna dooro OneDrive ka fursadaha.
Tallaabada 3. Saxeex xisaabtaada Onedrive, markaas barnaamijka doono falanqaynta xiriirrada gurmad onedrive. Xiriirada ayaa si toos ah loo dooran doono. Just guji Start Transfer, markaas barnaamijka kaa caawin doona inaad wareejiyo xiriiro si ay u phone LG ee dhowr ilbiriqsi.
LG waa soo saaraha caanka ah smartphone iyo waxa ay leedahay weyn macaamiisha saldhig ee USA. Waa caan ah ay sabab design ay, style, iyo hal-abuurka. Waxaa had iyo jeer ka dhigeysa weeraryahanka naqshado cusub iyo technology casriga ah. Waxa uu sidoo kale soo saaray telefoonada Nexus Google ka mid ahaa oo guul weyn. Halkan waxaa ku qoran toban LG telefoonada android sare waxaad ka heli kartaa in USA.
The taxane LG hayalka san ee telefoonada ka kooban yahay screens qalooca, ugu horeysay ee adduunka. The telefoonada kor ku qoran yihiin LG joogo smartphone aadka loo qiimeeyo ee suuqa Maraykanka maanta. Waxay kale oo ay caan ku ah ay design, style, bandhigay tayo af, camera, iyo tabo cusub. Inta badan telefoonada waa telefoonada-dhamaadka sare iyo cayaarta aad la telefoonada kale-dhamaadka sare. Sidaas oo telefoonka LG ah ayaad isticmaashaa?
> Resource > Android Sidee baad Bedelka Xiriirada ka Nokia in LG>